တစ်ခါတစ်ရံသင်လုံလောက်စွာမပြင်ဆင်နိုင် | Martech Zone
ငါ့မိတ်ဆွေကောင်းဂျေဆန် အဆိုပါ Bean ကိုဖလား ဒီကိုပို့လိုက်တယ်
သြဂုတ် 23, 2008 မှာ 7: 22 AM
အိုး! - နောက်တစ်ကြိမ်မိန့်ခွန်းအတွက်ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်သည်ကိုမှတ်မိလိမ့်မည်
သြဂုတ် 23, 2008 မှာ 8: 25 AM
??? Doug, ဒီ post ကိုယူပါ။ သင်၏ဘလော့ဂ်၏စံနှုန်းကိုနှိမ့်ချနေသည်။
23:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 15
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားဝိုင်းတွင် levity ရောနှောမှုလိုအပ်သည်။ 🙂
24:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 50
Nope, မ, ဒီချယူဘယ်တော့မှ။ ၎င်းသည်အရာဝတ္ထုသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်အမှန်တကယ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်ပုံဖော်မည့်အစားသင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ချေမှုန်းသည်။
အပြင်ကတကယ်ပါပဲ IS ရယ်စရာကောင်းတာကမင်းကိုသိတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေထဲကတစ်ယောက်ကသူ့ဆီလာနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုရစေချင်တယ်၊ ဘုရားသခင်ကသူလုပ်ခဲ့တယ်။ 🙂
သြဂုတ် 25, 2008 မှာ 6: 46 AM
Pretenders Big ကသူတို့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုလုပ်ခိုင်းပါတယ်။